सुनको आयात तथा खरिद–बिक्री सुचारु गर्न सुनचाँदी व्यवसायीको माग
रुखमाथि बनेको घरमा आउजाउ गर्न प्रतिबन्ध
प्रदेश प्रमुख डा. अहिराजले गरे मिथिला चित्रकलामा योगदान पुर्‍याउने कलाकारलाई सम्मान
काठमाडौँ– नेकपा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले मुलुकलाई भड्खालोमा पुग्नबाट समयमै जोगाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले
बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी : निजी स्वार्थनिम्ति लम्पट बन्नेहरूको आँखा खुलोस् !
रुपन्देहीमा केही खुकुलो पार्दै असार १४ सम्म निषेधाज्ञा थपियो
काठमाडौँ– पछिल्लो एक सातामा नेपाली सेनाले बाढीपहिरो पीडित १२१ जनाको हेलिकोप्टरबाट गरेको छ । मनसुन शुरूपछिको बाढी पहिरोमा परेका मध्ये
काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका १५ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को सरुवा गरेको छ । गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सोमबार १५ जना एसएसपीको सरुवा भएको प्रहरी प्रधान
काठमाडौँ– नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ५२२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्‍न प्रयोगशालामा गरिएको